ओलीको प्रस्ताब किन ठाडै अस्वीकार गरे प्रचण्ड ले ? – PuraKhabar
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरलाई उपराष्ट्रपति बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
वाम गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रको भागमा परेको उपराष्ट्रपति पद राजपालाई दिने ओलीको प्रस्तावलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने समर्थन गरेका छैनन् ।
प्रचण्डले ठाकुरको नाममा समर्थन जनाउन नसकिने जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको प्रचण्ड निकट स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार प्रचण्ड वर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई नै दोहोरनुपर्ने अडानमा अडिक छन् ।
अाेली सरकारलाइ सडकमा मात्र होइन सिंहदरबारभित्रै छिरेर नंग्याउँने कांग्रेसको चेतावनी !
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाई बहुमतको सरकार चलाइरहेका केपी शर्मा ओलीलाई सिंहदरबारभित्रै छिरेर नंग्याउने चेतावनी...
कम्युनिष्टहरुले काँग्रेसलाई अफ्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याएः पौडेल
काठमाडौँ–नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले काँग्रेस नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।...